BBC Somali - Cayaaraha - Fulham V Swansea
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 17 Maarso, 2012, 13:07 GMT 16:07 SGA
Kooxda kubadda cagta Fulham ayaa maanta garoonkeeda Craven Cottage ku qaabilaysa kooxda Swansea.
Labada kooxba waxay ku jiraan meel dhexe dhinaca tirsiga dhibcaha.
Fulham kala horaynta dhibcaha bartanka ayay u taagan tahay iyadoo booska tobanaad ku jirta.
Swansea-na kama dhibco liidato oo waxay iyaduna leedaha 36 dhibcood oo ay kula siman tahay kooxda Fulham.
Balse Fulham goolasha ay dhalisay iyo kuwa laga dhaliyay marka la kala jaro waxba uma soo harayaan. Swansea waxaa lagu leeyahay sadex gool.
Bishii December, 2011 oo labada koox is arkeen waxaa laba iyo eber ku adkaaday kooxda Swansea.
Fulham, waxaa laga sugayaa in ay ka aargudato kooxda Swansea maanta.
Swansea waxay ka soo badisay Man City iyo Wigan, taasoo rajadooda kor u soo qaaday kadib markii ay halis u galeen in ay dib ugu laabtaan Division ama heerka ay sanadkii hore ka soo gudbeen markii dhowr cayaarood oo is xiga laga adkaaday.
Inta cayaartu socoto nagula soo xiriir www.facebook.com/bbcsomali ama @twitter.bbcsomali haddii kale text message ku soo dir +44 77 86 20 50 85.